Ngezinye izikhathi kwanele ukusetha isimo ukuze ubone izithombe zezingane zakho ozithandayo isilwane isithombe laughing, futhi sibheke abalingiswa funny. Kuyinto omuhle futhi ezinhle funny oluhlaza silwane Om Nom. Lingubani leli qhawe? Udweba kanjani Am Nyama izigaba?
Hlangana Am Nyamom
Om Nom - onamileyo uhlamvu omuhle Cut the Rope ethandwa imidlalo mobile. It sifana umdwebo frog ezihlekisayo ngamehlo lenkhulu kanye tuft ezihlekisayo esime i iconsi nabokhulumile. Kulo mfanekiso, isicelo umdlalo kumlethela ngaphansi kwesicabha ebhokisini elikhulu uphawu. Critter uthanda amaswidi kanye nje uthanda amaswidi. Ukuze uthole kubo, izinyane ophoqelelwe ukwenza zonke izinhlobo namaqhinga, liyaphenduka, futhi ukweqa, kanye nokusetshenziswa abasizi kanye nezinto ezihlukahlukene.
Unomuzwa umuzwa njalo yindlala futhi kumele njalo bondliwa amnandi. Futhi lolu hlelo lokusebenza mobile abadlali kudingeka uthathe intambo ku zazo ogibele emhlabeni candies ezimbili anemibala. Futhi kufanele wenziwe izikhathi ezingaki ukuze amaswidi ngokwabo falling isidalwa oluhlaza emlonyeni wakhe. Njengoba base bethole candy, izinyane ngentshiseko smiling futhi chomps kakhulu. Kodwa indlela ukudweba Am Nyama izigaba? Lokhu uzokutshela ngokuningiliziwe.
Yini nje nempela kufanele uzibekele Am Nyama?
Ukudweba uhlamvu bejabule yomdlalo, futhi muva nje, ikhathuni mini-uchungechunge igama elifanayo, uzodinga:
ephepheni elimhlophe (kuxhomeke nosayizi, ngakho ingasetshenziswa njengendlela notebook kanye notebook kuseli evamile);
ipensela elula (njalo kangcono ukwenza indaba emfushane ipensela, ngendlela esifike ngesikhathi ukuze ususe engadingekile);
emapeniseli emibala, upende, amakhrayoni nofana izibaya ezinemibala (njengoba umuntu).
Beka ephepheni endaweni eqinile (itafula, sezinyawo, ifolda enkulu nge Uhlaka eqinile nakho ngeke kusize), thatha ipensela esandleni sakho bese uzama ukuthola indlela ukudweba Am Nyama izigaba.
Isinyathelo 1: Dweba Om Nom amehlo
Qala ngokudweba uhlamvu yakho ngokuchaza indawo yayo. Futhi izokwenziwa maphakathi, phezulu, phansi, esinxeleni, kwesokudla, kukuwe. Ukuze wenze lokhu, wagqoka ephepheni ngepeniseli notch encane. Ngaphezu kwalokho, ngaphambi draw Am Nyama, ukudweba indilinga phezu ndawo oyamukelayo (isb. A. Character has simise oyindilinga).
Hlukanisa it ngesigamu nendawo futhi zibheka (emgqeni isikhathi kuyadingeka ukwenze cishe ezingabonakali, ngakho asikho isidingo ukusebenzisa ingcindezi ukuba ipensela). Engxenyeni yokuqala the circle (phezulu) ukudweba okusaqanda ezimbili ezinkulu (ngaphandle ulwelwesi zezinzwa phakathi). Dorisovyvat kubo imigqa emibili emifushane (nhlangothi zombili), futhi phakathi nendawo udonsa umfundi ezimbili. Khona-ke sizokubonisa ukudweba Am Nyama kanjani (izithombe ngomfanekiso wakhe kungabonwa ngezansi) ngokuphelele.
Isinyathelo umlomo 2. Draw Om Nom sika
Bude eceleni "nyamchika" (yokwelula wabahlukanisa) bese uxhuma (kuyoba umlomo esizayo). Ngenhla amehlo phezu upende oluhlaza forelock side nge ekupheleni oyindilinga. Ingxenye engenhla "nyamycha" ukulungele.
Isinyathelo 3. Dweba Om Nom isiqu
Isinyathelo esilandelayo sendlela ukudweba Am Nyama kancane kancane abe umdwebo isiqu Sika uhlamvu Rope. Kuze kube yimanje, emuva phansi 1-2 mm zisuka emlonyeni futhi ukusuka lapho yehla inoplanetyashki imigqa emibili (esitshekile) bathele ukuba playboy yethu esifubeni. Elingezelelako parallel okufanayo emehlweni afaka imilenze emibili.
Isinyathelo 4. Dweba imilenze indluzelekazi namazinyo
Ngesikhathi sigaba penultimate ukudweba Om Nom amazinyo amane nge ibanga therebetween encane. Khona-ke bachitha imigqa emibili kusukela esifubeni uhlamvu ezihlekisayo, futhi kwatholakala ohlangothini. Etholwe imilenze emibili indluzelekazi.
Ekupheleni umlingisi kokuqendwa kuyoba kuphela upende oluhlaza. Ungakhohlwa ukususa umugqa owengeziwe. Ngomphumela ogcwele Ungasondelana ukuqedela round candy ezimbili anombala yezinhlamvu. Ungase futhi ukuthola indlela ukudweba Am Nyama ugibele entabeni amaswidi.
Diego Velaskes (Diego Rodriguez de Silva Velazquez): lokusungula kanye biography (isithombe)
Gqoka Crochet - ukhululekile, isifazane, esiyingqayizivele
Apperception - kuyinto ... bezibona kwengqondo. Apperception - test